Ilukuluku ngeqhwa obungalazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ilukuluku ngeqhwa owawungalazi
Maphakathi nobusika, lapho ingxenye enkulu yeYurophu neNyakatho Melika imbozwe yiqhwa, kuyathakazelisa ukwazi kabanzi ngesimo seqhwa ukuze uziqonde kangcono. Ngalesi sizathu sizokutshela 4 ukwazi mayelana neqhwa lokho kuzokumangaza nakanjani.
Ake sazi kabanzi ngaye.
1 Isithwathwa singaba pinki
2 Iqhwa leqhwa aliyona imaminerali
3 I-China igubha umkhosi omkhulu weqhwa
4 Likhithika kwamanye amaplanethi
Isithwathwa singaba pinki
Imvamisa, umbala weqhwa umhlophe njengoba ubuso bubonisa ukukhanya kwelanga, kubuyisele esikhaleni, kepha ingahle futhi ibe pinki ngenxa yokuba khona kwe-microalgae engafinyelela izigidi zamakhophi ngesentimitha ngalinye leqhwa njengoba sishilo Lesi sihloko, noma eminye imibala uma ixutshwe nokungcola.
Iqhwa leqhwa aliyona imaminerali
I-amaminerali iqinile ngokufana enokwakheka okucacile (kodwa okungalungisiwe) nokwakheka kwe-athomu oku-odiwe. Iqhwa akusona isimo samanzi esijwayelekile, futhi amanzi awuketshezi awanakho ukuhleleka okuhlelekile, ngakho-ke awuthathwa njengamaminerali.
I-China igubha umkhosi omkhulu weqhwa
Waziwa ngokuthi yiHarbin Ice and Snow Sculpture Festival futhi ubulokhu ubanjwa minyaka yonke kusukela ngoJanuwari 1963. Kusukela lapho, izakhamizi nezivakashi bathokozela izithombe ezibabazekayo ezenziwe ngento, eHarbin Kuhlala isikhathi eside njengoba benamazinga okushisa aphakathi nendawo -18,3ºC ngenyanga yokuqala yonyaka.
Likhithika kwamanye amaplanethi
Isithwathwa ku-Mars. Isithombe - NASA
Singacabanga ukuthi likhithika kuphela lapha, emhlabeni, kepha ngabe senza iphutha. Isithwathwa naso siwela eMars naseVenusYize kungafani nalokhu esikubonayo: okokuqala, yi-carbon dioxide ewela esimweni senkungu, kanti kowesibili, iqhwa liyi-pyrite evuthwa amazinga okushisa aphezulu.
Uyazi yini ezinye izifiso zeqhwa?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ilukuluku ngeqhwa owawungalazi
Imiphumela emibi yokuncibilika emhlabeni
Ama-snowflakes, akhiwa kanjani futhi izinhlobo zawo zincike kuphi?